10 Jardiinooyinka Mowduuca Ugu Fiican Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Jardiinooyinka Mowduuca Ugu Fiican Yurub
Mid ka mid ah fasaxyada ugu xiisaha badan qoysaska ayaa socdaal xiisa leh ku tagaya mid ka mid ah jardiinooyinka mawduucyada ugu fiican Yurub. Kaliya Faransiiska, aad leedahay doonaa 3 jardiinooyinka mawduucyada cajiibka ah, oo waxaan gacanta ku soo xulnay 10 jardiinooyinka mawduuca ugu fiican Yurub safarkaaga xiga ee qoyska. Relucocoaster-ka adduunka ugu fiican, kaymo sixir, dhulal sixir ah, sheekooyin, iyo soojiidashada waqtiga-safarka, waa ku sugayaan, min France ilaa Austria iyo UK.
1. Europa-Park Oo Ku Taalla Rust Jarmalka
Baarkinka ugu weyn Jarmalka, beerta mawduuca 'Europa theme' ayaa ka badan 100 soo jiidashada. Europa-Park waa baarkinka labaad ee ugu caansan Yurub, ka dib Disneyland ee Paris. Haddii carruurtaadu jecel yihiin gawaarida gawaarida, markaa qarax ayey ku lahaan doonaan korkiisa 13 gawaarida gawaarida ee jardiinada.
Haddii aad qorsheyneyso safar Strasbourg, markaa waa inaad qorshaysaa ugu yaraan 2 maalmood loogu talagalay Europa-Park. This is due to the number of exciting attractions already mentioned, iyo bandhigyada cajiibka ah ee dheeriga ah. The youngest will enjoy an enchanting elf ride, iyo wareegga Big-Bobby-Car ee loogu talagalay wadayaasha tartanka, halka carruurta waaweyn iyo waalidiinta lagu afuufin doono dabka Blue Fire Mega ee ku yaal muuqaalka Icelandic.
Waxaa intaa dheer, haddii aad runtii qorsheyneyso booqasho dheer, markaa waad joogi kartaa mid ka mid ah hoteelada goobta ku yaal. Sidan ayaad uga faa'iideysan kartaa booqashadaada Yurub-Park, isla markaana khibrad u leh dhammaan meelaha mawduucyada laga hadlayo: Laga soo bilaabo Adventureland ee Afrika ilaa Grimm’s Enchanted key.
Sida Loo Gaadho Europe-Park?
Europa-Park wuxuu ku saabsan yahay 3 saacadaha ka imanaya Frankfurt, waadna ku gaari kartaa adiga safarka tareenka guud ahaan Jarmalka illaa Ringsheim. Markaasuu, waad kireysan kartaa gaari ama wareejin bas.
Cologne ilaa Frankfurt Tareen
Munich ilaa Frankfurt Tareen
Hanover ilaa Frankfurt Tareen
Hamburg ilaa Frankfurt Tareen Tareen ah
2. Disneyland Paris Faransiiska
Waxay u badan tahay inay tahay meesha ugu caansan ee loo yaqaan park park on our 10 jardiinooyinka mawduuca ugu fiican liiska Yurub, Disneyland ee Paris waa mid ay jecelyihiin dadka soo booqda da 'kasta. Jilayaasha soo jiidashada leh ee aan ka helno sheekooyinka aan jecel nahay ee Disney, soo jiidato malaayiin booqdayaal ah sannad kasta.
Disneyland waxay ku taal magaalada Chessy, ee France. Waxay ku taal hoyga Walt Disney istuudiyaha iyo jardiinooyinka nasashada, halkaas oo aad uga talaabsan karto sheeko xariir, oo riyadaadii caruurnimo oo dhami way rumoobi. Dunida Walt Disney way soo noolaataa, ee soo jiidashada cajiibka ah, iyo bandhigyo sida Alice's labyrinth iyo Mickey's 4D show.
Waad ku dheereyn kartaa sixirkan dhammaadka wiigga, oo joog hudheelada Disney, ama hudheellada wadaagga ah oo ah masaafo bilaash ah oo ka fog Disneyland.
Sida Loogu Tago Disneyland?
Disneyland waa cadaalad 20 daqiiqado u jirta Paris. Waxaad toos uga heli kartaa garoonka diyaaradaha ee Paris, ama xarunta tareenka ee Marne-la-Vallee Chessy.
3. Beerta Mawduuca Viennese Prater ee Austria
Prater Wien waa jardiinada ugu fiican mawduucyada Awstaria, iyo mid ka mid ah 10 jardiinooyinka mawduuca ugu fiican Yurub. Qoyskaaga ayaa waqti layaableh ku lahaan doona mashiinada badan ee duurjoogta ah, iyo soojiidashada xaqiiqda dalwaddii, sida Dr.. Archibald.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira gawaari go-go, qalcado dabacsan, iyo in la wada buuxiyo, weyn ee Ferris Wheel ee Austria. Gawaaridaan weyn ee Ferris waxay furan yihiin sanadka oo dhan waana mid ka mid ah Astaamaha ugu sarreeya ee Vienna.
Sida Loogu Tago Vienna’s Prater Theme Park?
Boqorka beerta madaddaalada wuxuu ku yaalaa degmada 2aad ee Vienna, waxaadna ku gaari kartaa tagsi ama tareen dhulka hoostiisa mara ka yimid bartamaha magaalada.
4. Gardaland Talyaaniga
Sidaad qiyaasi lahayd, Gardaland waxay ku dhowdahay harada Garda ee dalka Talyaaniga. Sida baarkinka mawduuca oo ku yaal meel u dhow biyaha, jardiinada loo yaqaan 'Gardaland park park' waxay leedahay raacid biyo badan oo xiiso leh, sida doonta Colorado, iyo xawaaraha kaynta.
Intaa waxaa dheer, Gardaland sidoo kale waxay leedahay aquarium nolosha badda dabcan, of 13 meelaha mawduucyada ka kooban, iyo 100 noocyada. shaki kuma jiro, carruurtaadu gabi ahaanba waa la xiiseyn lahaa badda hoosteeda, oo weligood ma dooni doono inaan baxo.
Taas lidkeeda, hadaad dhan tahay adrenalin, then you’d love the thrilling Blue Tornado rollercoaster.
Sida Loogu Tago Gardaland Theme Park?
Tareenka Trenitalia waad ka raaci kartaa Venice ilaa saldhigga Peschiera del Garda, ka dibna baska u raaca Gardaland.
Baarkinka mawduuca Efteling waa mid ka mid ah 10 jardiinooyinka mawduuca ugu fiican Yurub. Sheeko-xariirooyinka aan dhammaanteen ku soo wada kornay waxay ku soo noolaadeen meelaha soo jiidashada leh ee Efteling iyo keymaha xiisaha badan, laga bilaabo Hans Christian Andersen ilaa Walaalaha Grimm.
Fata Morgana ayaa kuu kaxayn doonta Bariga Fog iyo dhulalka Salaadiinta, halka xeebayaasha biyaha iyo kuwa uumiga kaxeeya ay kaa qaadi doonaan wixii ka dambeeya riyadaadii ugu xiisaha badnayd. Adduunyada carwada ayaa kaa sugaysa a doon kortaan mugdiga iyo qarsoodiga ah Droomvlucht.
Erayadu kuma filna in lagu sharaxo sixirka Efteling theme park ee qoyska oo dhan, sidaa darteed waa inaad si fudud waqti ugu heshaa jardiinadan mawduucyada ah ee ku saabsan fasaxaaga Nederland.
Sida Loo Helo Efteling Park Theme?
Tareenka waad ka raaci kartaa Amsterdam ilaa ‘s-Hertogenbosch, ka dibna baska toos ugu taga Efteling theme park.
6. Beerta Mawduuca Legoland ee ku taal Windsor UK
Marka soojiidashada oo dhami ay yihiin lego-sameeyey, jardiinadan dulucdu waa janno kale oo loogu talagalay carruurta. Xadiiqadda Legoland ee ku taal Windsor waxaa loo sameeyay carruurta ku xeeran nidaamka toy-ka Lego.
Sidaa darteed, wax kasta oo rolayaal ah, doon, iyo tareenka rakaabka waxaa lagu farsameeyaa qaybo gogo 'oo waaweyn. Jardiinadan xiisaha leh ee England ku taal waxay ku taal Berkshire oo nus-saac ayey kaliya uga jirtaa London.
Sida Loo Gaadho Legoland Theme Park Oo Ku Taal Magaalada Windsor?
Waa inaad tareenka ka raacdaa London Paddington ilaa Windsor & Eton Central oo leh xiriir, ama tareen toos ah uga socda London Waterloo. Markaasuu, waxaa jira basas laga raaco saldhig kasta oo tareen oo aadaya Legoland.
7. Beerta Asterix Theme ee Faransiiska
Haddii ay dhacdo inaadan aqoon, Parc Asterix wuxuu ku saleysan yahay Albert Uderzo iyo Rene Goscinny ee taxanaha buugga majaajillada caanka ah, Asterix. Sidaa darteed, ku dhow 2 milyan oo soo booqdayaal ah ayaa ku raaxeysta waxyaalaha yaabka leh ee ku saabsan baarkinka labaad ee ugu weyn Faransiiska. Midka koowaad dabcan waa sixir Disneyland.
Gudaha Asterix theme park waxaad ka heli kartaa Discobelix-ka weyn waxaadna yeelan kartaa wakhti aad u wareegaya, la kulan hoonbarrooyinka iyo xoolaha kale at Village Gaulois, oo dabcan ku raaxeysiga soojiidashada kale ee xiisaha leh.
Sida Loo Helo Baarkinka Asterix?
Asterix theme park waa kaliya 30 daqiiqado ka yimid Paris khadka B ee tareenka RER oo ka yimid Paris Gare du Nord. Kadib waxaad ka degaysaa Charles de Gaulle 1 Airport, oo u jiheysta baska.
8. Beerta Futuroscope ee Faransiiska
Ku dheelista aalado, safarka waqtiga, oo u safro 4 geesaha dhulka oo kor ka sarreeya, Beerta mawduuca Futuroscope ayaa ka baxsan dunidan. Jardiinadan xiisaha leh waxay ku taalaa gobolka quruxda badan ee Nouvelle-Aquitaine ee Faransiiska.
Futuroscope wuxuu isku daraa soojiidashada dareenka leh sayniska wuxuuna u noqon doonaa madadaalo iyo waayo aragnimo waxbarasho qoyska oo dhan.
Sida Loogu Tago Futuroscope Theme Park?
Waxaad u tagi kartaa goobta xiisaha leh ee Futuroscope theme park ee Eurostar illaa Lille ama Paris, oo loo beddelo TGV.
9. Chessington World Of Adventures Theme Park ee Boqortooyada Midowday (UK)
Chessington World of Adventures ee Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Midowday waa jardiinooyin safari u gaar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in booqashooyin kasta oo qoys oo lagu tago beerta madadaalada ee Chessington ay isu rogeyso u jeesasho qoys si adduunyada layaabka leh iyo soo jiidashada leh ee xayawaanka duurjoogta ah iyo guud ahaan Afrika..
Intaas waxaa sii dheer riwaayadaha duurjoogta ah, waxaad ku raaxeysan kartaa hoyga hudheelada safari iyo Azteca, oo sii joog. Sidaas, hadaad gasho tacabur duurjoog ah, waxaad waqti layaableh ku yeelan doontaa baarkinka dusha sare ee kaymaha, Tiger dhagax, iyo wabiyada.
Dunida Chessington ee tacaburrada waxaa loogu talagalay qoyska halista ah, waana lagaa doonayaa inaad haysato waqtiga noloshaada.
Sida Loo Helo Chessington World of Adventures?
Chessington park theme park waa 35 daqiiqado ka yimid bartamaha London tareen. Sidaas, waxaad tareenka Koonfur-Galbeed ka raaci kartaa Waterloo ilaa saldhiga South Chessington.
10. Beerta Mowduuca Fantasialand ee Jarmalka
Fantasialand dhammaan riyooyinka khiyaaliga ah ee carruurta ayaa ku rumoobay 6 adduunyo qurux badan. Adduun walba, waxaad ku raaxeysan kartaa raacdooyinka ugu xiisaha badan, iyo indhaha iftiinka iyo midabka.
Sidaas, maxaa ka dhigaya Fantasialand mid ka mid ah jardiinooyinka mawduucyada ugu fiican Yurub? Magaalada Shiinaha, Mexico, Africa, Berlin, Magaalada Wuze, boqortooyada qarsoodiga ah, iyo Rookburgh, leh soo jiidasho layaableh adduun kasta. Laga soo bilaabo Black Mamba ilaa Taron caanka ah, raacitaanadan ayaa ku qarxin doona.
Sida Loogu Tago Fantasialand?
Waxaad ka raaci kartaa bas laga raaco tareenka Bruhl. Fantasialand waxay ku taalaa Bruhl, kaliya 2o daqiiqo oo ka socota Cologne.
Si loo soo koobo baashaalkan, Maskaxda ugu dhalashada badan Yurub waxay abuureen jardiinooyinka ugu xiisaha badan adduunka. Haddii aad la socotid socod baradka ama aad u qaadanaysid carruurta waaweyn riwaayad, ah 10 jardiinooyinka mawduucyada ugu fiican liiskayagu waxay leeyihiin soo jiidashada ugu fiican da 'kasta.
Frankfurt ilaa Cologne Tareen tareen ah
Dresden to Cologne Tareen A
Aachen ilaa Cologne Tareen
halkan ee Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta safarkaaga “10 Jardiinooyinka Mowduuca Ugu Fiican Yurub”.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada blog-ka "10 Meelaha Ugu Fiican Mawduucyada Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-theme-parks-europe%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
BestthemeparksEurope Qoyska Hawlaha Dibedda dulucda mawduuca ThemeParks tareen safarka traintraveleurope